နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၀) - Myanmar Network
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၀)
Posted by Language Republic on December 19, 2014 at 17:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂၀) မှာ စားသောက်ဖွယ်ရာများ အကြောင်းပြောရာတွင် သုံးသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ စကားပြော သင်ခန်းစာ ကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Shirley : Would you like some cookies? I just made them.
Louise : Thank you. Yes, I would.
Shirley : These are chocolate, and those are almond-flavored.
Louise : I guess I’ll tryachocolate one first. Mmmm… This is delicious! Are they hard to make?
Shirley : No, they’re really quite easy. Waitaminute; I’ve got the recipe right here. See these are the ingredients and then you just follow the directions.
Louise : That does look easy. I think I’ll make some tonight.
အပေါ်က dialogue ထဲက မှတ်သားဖွယ်ရာများကို လေ့လာရအောင်။
ဒီ sentence က Would you like to have some (of these) cookies? လို့ပြောတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ နောက် ဒီလိုလည်း Do you want some cookies? လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ Would you like some cookies?
Just = very recently. (I just made them. အခုလေးတင်လုပ်ထားတာ။)
A chocolate one.
ချောကလက် နဲ့ဟာ chocolate one လို့ပြောတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် chocolate အပေါ်မှာ stress ထည့် ပြောရတယ်။ ဒီနေရာမှာ သုံးတဲ့ one ဟာ နံပါတ်မဟုတ်ပဲ pronoun အဖြစ်နဲ့သုံးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် stress မထည့်ရဘူး။ (chocolate one = ချောကလက် နဲ့ဟာ)
Mmmm isasound denoting gustatory enjoyment.
အရသာရှိတယ် ဆိုတာကို ပြချင်လို့ မြည်သံ ထည့်ပြောတာပါ။
Are they hard to make? (hard to = difficult to)
Hard to ဆိုတာ တစ်ခုခု လုပ်ရတာခက်တယ် လို့ပြောရင်သုံးတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်က easy to ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ hard to/ difficult to/ easy to တို့ ရဲ့အသုံးတစ်ချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Is that hard to do?
Are these books difficult to read?
Is that paper hard to write on?
My new car is easy to drive.
These shirts are easy to wash and so on.
I’ve got the recipe ...
Got နဲ့ have ဖလှယ်ပြီး သုံးလို့ရတယ်။ Alternative form: "I have the recipe. .."
Just = simply: only. (You just follow the directions. လိုက်လုပ် ရုံပါဘဲ။)
That does look easy.
ဒီနေရာမှာ does က easy ကို လေးနက်စေအောင် ရှေ့ကနေ တွဲထည့်ပြောတာဖြစ်တယ်။ does မှာ strong stress ထည့်ရတယ်။
Julia M. Dobson နှင့် Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ်မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၃)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၄)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၅)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၆)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၇)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၈)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၉)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၀)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၁)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၂)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၃)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၄)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၅)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၆)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၇)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၈)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၉)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၁)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၂)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၃)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၄)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၅)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၆)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၇)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၈)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၉)
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၃၀)
LESSONS FROM OUR ARCHIVE
လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း မဖြေမီ အလုပ်ရရှိစေနိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ရန်အချက် (၅...
အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons
[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]
- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp
© 2020 Created by Myanmar Network. Powered by